Akụkọ Alex Khvoynitskaya na Martech Zone |
Edemede site na Alex Khvoynitskaya
Val Kelmuts bụ onye isi ndị isi na ngalaba-nchoputa na Oge ezumike, ụlọ ọrụ imewe na mmepe ecommerce hiwere isi na Redwood City, California. O nwere ahụmahụ 10 afọ na mmepe ngwanrọ omenala, njikwa ahịa, na mmepe azụmahịa. Val bụ ọkachamara nkwado ahịa Adobe Commerce, ọkachamara n'azụmahịa Shopify, yana onye otu PMI.
Ntuziaka ngwa ngwa maka ịmepụta iwu ịzụ ahịa ịzụ ahịa na Adobe Commerce (Magento)
Tuesday, February 22, 2022 Tuesday, February 22, 2022 Alex Khvoynitskaya
Ịmepụta ahụmịhe ịzụ ahịa na-enweghị atụ bụ ebumnuche bụ isi nke onye nwe azụmaahịa ecommerce ọ bụla. N'ịchụso ndị ahịa na-aga n'ihu, ndị ahịa na-ewebata uru ịzụ ahịa dị iche iche, dị ka mbelata ego na nkwalite, iji mee ka ịzụrụ ihe na-eju afọ. Otu n'ime ụzọ enwere ike isi nweta nke a bụ site na ịmepụta iwu ụgbọ ala ịzụ ahịa. Anyị achịkọtala ntuziaka maka imepụta iwu ụgbọ ahịa na Adobe Commerce (nke a na-akpọbu Magento) iji nyere gị aka ịme usoro mbelata gị.